Huawei Tarisa 3 uye MaharaBudhi 4, kubheja pane yakakwira-magumo mune anopfeka | Gadget Nhau
Kambani yeAsia yaita hurukuro yepasirese umo yakatitendera kuti titarise kwekutanga nhau dzinosvika mukota inotevera. Munguva pfupi tichava nemukana wekukuunzira zvakadzama kuongororwa kweizvi zvese zvishandiso, panguva ino isu tichakuudza izvo zvavo nhau.
Huawei anotendeuka musika wakatarisana neiyo nyowani Huawei Tarisa 3 uye Tarisa 3 Pro ichiperekedzwa neruzha ruzha neayo TWS FreeBuds 4 mahedhifoni. Ngatione kuti ndezvipi zvese zvakagadziridzwa zvinovimbiswa neHuawei nemidziyo yayo mitsva ine uye kana zvichinyatso kukosha kubheja pane idzi dzese nhau.
1 Huawei Tarisa 3 uye Tarisa 3 Pro
2 Huawei MaharaBuds 4
Huawei Tarisa 3 uye Tarisa 3 Pro
Isu tinotanga newachi kubva kukambani yeAsia, inotora dhizaini dhizaini nekuwedzera kwakanatswa kuvaka. Icharamba ichiperekedzwa nemuchina bhatani, kunyangwe panguva ino ivo vaisanganisira yakatenderera "korona" inotibvumidza kusangana HarmonyOS 2 seSisitimu Inoshanda. Ose ari maviri achakwidza mapaneru 1,43 ″ AMOLED ine 1000 nits, nepo "Pro" vhezheni ichinge iine safiro kristaro.
Hi6262 ichava processor inotarisira basa pamwe ne2 GB ye RAM uye 16 GB yekuchengetedza kwese. Tichava ne4G yekubatanidza kuburikidza neSIM, moyo rate yekutarisa, yeropa oxygen sensor, WiFi, Bluetooth 5.2 uyezve NFC. Izvi zvichatibvumidza kuti tiongorore akawanda ma parameter, pamwe nekutevera kudzidziswa kwedu kuburikidza neGPS, inova iri miviri chiteshi mune iyo Pro vhezheni .Tichiri tisina zuva repamutemo rekuburitsa kana mutengo unofungidzirwa.
Huawei MaharaBuds 4
Chizvarwa chechina cheakanyanya kufarirwa mahedhifoni anosvika aine inonakidza kara uye inozivikanwa zvikuru yekuchaja kesi. Huawei ikozvino yavaita kuti vawedzere kuumbana, kureruka uye mune dzidziso yakasimba simba. Vachapa kubatana kweBluetooth 5.2 uye bhatiri re30 mAh kune yega nzeve ne410 mAh mune yekuchaja kesi.
Neiyi nzira tichava nazvo Maawa mana ekuzvimirira mune mahedhifoni uye mamwe makumi maviri maawa mune iyo kesi. Tinogona kuvabatanidza kune maviri madhivha panguva imwechete nekutenda kune iyo mbiri kubatana ine chete 90 ms ye latency. Iwe ikozvino une Kushanda Noise Kanzura kwakanyanya kusimba kusvika 25 dB kunyangwe isina michina yekuzviparadzanisa. Iyo zvakare inogara iko kushanda kweFreeBuds 3 nekubatana kwayo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Gadget nhau » General » Huawei Tarisa 3 uye MaharaBudhi 4, kubheja pakakwirira-kumagumo mune anopfeka